Ngaba unengxaki kwiscreen sokuchukumisa i-iPad mini? Sikunika izisombululo | Iindaba zeGajethi
Ngaba unengxaki kwiscreen sokuchukumisa i-iPad mini? Sikunika izisombululo
UPablo Ortega | | amacwecwe, Umnxeba
Uhlaziyo lwamva nje lwesoftware ye-Apple lubangele iingxaki kwezinye izixhobo zenkampani kwaye yenye yezona zininzis echaphazelekayo ibe yi-mini mini ye-iPad (ngakumbi imodeli yesizukulwana sokuqala). Asipheleli nje ekufumaneni ii-glitis zokudibanisa kule nguqulo yecwecwe le-Apple, kodwa kukwakho neengxaki ezinkulu kwiscreen sokuchukumisa isixhobo. Oku kunokubangelwa yimicimbi yehardware, kodwa kukwakho nezixhobo zesoftware ezinxulumene nemvakalelo yokuthinta isikrini.
Ngamanye amaxesha kuyenzeka ukuba uzama ukujonga indlela yakho I-iPad kunye nescreen akusebenzi kakuhle. Le bug elula ukuyibona ngeFaceTime, umzekelo. Ukwenza oku, qala umnxeba wevidiyo omtsha kwaye ujonge ukuba amaqhosha ukutshintshela kwikhamera engasemva okanye ukuwuphelisa umsebenzi wokufowuna. Ukuba abaphenduli kwiminwe yakho, oko kuthetha ukuba isikrini sakho se-iPad sinengxaki. Zama ezi zisombululo zilandelayo:
1 1. Ukucoca iScreen
2 2. Hlaziya iSoftware
3 3. Nyanzela ukuseta kwakhona i-iPad
4 4. Cwangcisa izicwangciso
5 Ngaba awusebenzi kwiscreen sakho sokuchukumisa esincinci se-iPad?
1. Ukucoca iScreen
Isikrini sakho singangcola kwaye ngenxa yoko kunzima kuye ukuba aphendule kwizimbo zomzimba wakho okanye akazazi ngokuthe ngqo. Le ngxaki ifana nale siyiqokelele kunye nekhusi le- Motorola Moto X isizukulwana sokuqala. Kuba ecocekileyo isikrini se-iPad Sicebisa ukuba usebenzise imveliso elungileyo ekucoceni izikrini zokuchukumisa okanye usebenzise naliphi na ilaphu onalo ekucoceni iiglasi. Ukuba ubeke iphepha lokukhusela kwikhusi, lisuse kuba oku kungangunobangela wengxaki.
2. Hlaziya iSoftware
Jonga ukuba Inkqubo yokusebenza ihlaziywa kwinguqulelo yamvanje ekhutshwe nguApple. Yiya kuseto- Jikelele- uHlaziyo lweSoftware. Khuphela ingxelo yokugqibela. Ukuba sele uhlaziyiwe kuhlobo lwamva nje, qhubeka ngenqanaba elilandelayo.
3. Nyanzela ukuseta kwakhona i-iPad
Ukuba ingxaki yisoftware, inokusonjululwa ngefayile ye- ukunyanzelwa ukuqala kwakhona. Sikwazile ukusombulula iingxaki zescreen sokuqala se-iPad mini ngeli nyathelo. Sincoma ukuba uqale uvale zonke izicelo ozivulekileyo kwaye ucinezele iqhosha elicinywayo kunye neqhosha lasekhaya ngaxeshanye imizuzwana elishumi. Xa ilogo yeapile ibonakala ungazikhulula amaqhosha. Jonga ukuba yonke into isebenza ngoku ngoku.
4. Cwangcisa izicwangciso
Ukuba akukho nanye kula manyathelo akusebenzeleyo ukuza kuthi ga ngoku, kungcono ukuba seta zonke useto lwe-iPad. Yiya kuseto- Ngokubanzi- Cwangcisa kwakhona kwaye ucofe ukhetho lokuqala: «Cwangcisa Useto». Idatha kunye nemixholo ye-iPad yakho ayizukucinywa.
Ngaba awusebenzi kwiscreen sakho sokuchukumisa esincinci se-iPad?
Eyona nto inokwenzeka kukuba Ingxaki sisixhobo. Esona sisombululo sishiyekileyo kukusa kwivenkile ekufuphi yeApple okanye uqhakamshelane nenkxaso yezobuchwephesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » amacwecwe » Ngaba unengxaki kwiscreen sokuchukumisa i-iPad mini? Sikunika izisombululo
UPablo Rangel sitsho
Ukuchukumisa i-iPad yam akusebenzi, ukuba ndinokuyivula kodwa ngalo mzuzu utyibilika ukuvula, isixhobo asiyivumeli, sele ndiwenzile onke amanyathelo acetyiswayo kodwa andikwazi…. Into endiyenzayo?? ngokubhekisele
Phendula Pablo Rangel
Kwenzeka into efanayo kum, ndingathetha noSiri kwaye ndityibilike kwincoko, kodwa xa kufikwa kwisilayidi sokuvula apho ndihlala. Ukongeza, ndinemeko eyiSmart xa ndiyivula, kufanele ukuba indithumele ukuba ndiyifake ngokuthe ngqo ipini, kodwa ngoku xa ndiyivula ithumela ukuba ndiyilayide. Ndiyakholelwa ukuba sisoftware bug enxulumene nokutshixa isikrini.
Ngaba isisombululo sesi-3 siyabuyiselwa (siqala ukusuka ku-zero)?
Nditshintshe iscreen kuba, yaphukile kwaye ngoku ayisilayidi, iyavula kuphela
Kwenzeka into efanayo kum, ndiyitshintshe kwaye ayisebenzi ...
Molo apho..! wenze ntoni ngomhlaba? Ndiyitshintshile kuba enye yaphukile kodwa le ayisebenzi.
Phendula ku danielihn
Ngesisombululo sesithathu esisombulule ingxaki yethebhulethi, ngescreen se-crazy
Ubhale yedwa uye waphambana kwakhona
Edith galvan sitsho
Xa ndivula i-iPad, kwaye ndiqala naliphi na iphepha, emva kwemizuzu emi-5 iqala ukubonelela ngesikrini, amaphepha angabuzanga ayavulwa, amaphepha afakwa kuGoogle, imidlalo iyavulwa, kwaye ayikuvumeli ukuba uqalise kwakhona yiyo.
Phendula uEdith Galvan
Kwenzeka into efanayo kum kwaye emva kokwenza ukhetho oluninzi abalucebisayo, iyaqhubeka ngoluhlobo! Isisombululo yiya kuApple kwaye ujonge kwaye ngayiphi indlela yokutshintsha. Akulunganga ukuba into ihambe kakubi ngexesha elifutshane kangaka!
Xa ndivula i-iPad, kwaye ndiqala naliphi na iphepha, emva kwemizuzu emi-5 iqala ukubonelela ngesikrini, amaphepha angabuzanga ayavulwa, amaphepha afakwa kuGoogle, imidlalo iyavulwa, kwaye ayikuvumeli ukuba uqalise kwakhona yiyo. Ndingayisombulula njani lonto ?? Ngaba kunokwenzeka ukuba unobangela wayeyishiya elangeni engaqondanga ??? Enkosi
U-OLG GUTIERREZ sitsho
I-ipad yam yi-4 emini kwaye isikrini siyaphambana ukuba kufuneka nditshintshe i-digitizer iphela okanye umphezulu.
Phendula OLG GUTIERREZ
Yenz lopez sitsho
Imibuliso, i-iPad yam hayi mva nje, ungayisebenzisa ikhibhodi, kubonakala ngathi icandelo elingezantsi aliphenduli (isithuba, amanani, njl.) Ukuze usebenze kufuneka ujike. Kwaye iyasebenza kodwa ixeshana kwaye ihlala injalo.Ndicela undicebise ukuba ndiyenze ukuyisombulula, enkosi imeyile dopyen@hotmail.com
Phendula uYenz lopez
Ahhh ndilibele. Kuthatha ixesha elide ukutshaja ibhetri kwaye uyisebenzise ngokukhawuleza okukhulu, enkosi
UFRANCISCO UQINISEKILE sitsho
Kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo ndaye ndayihlaziya i-ipad yam encinci kwaye ukusukela izolo amaxesha ayalunga kwaye isikrini siyancipha, inokuba yintoni ???
Phendula uFRANCISCO RECALDE
I-Nomacs: Umbonisi oBalaseleyo weSithombe simahla kwiWindows
INokia Lumia 830: Uphengululo lweVidiyo kunye noHlahlelo